किन मोदीका लागि पाकिस्तानीले आकाश मार्ग खुल्ला गर्‍यो ? – www.agnijwala.com
किन मोदीका लागि पाकिस्तानीले आकाश मार्ग खुल्ला गर्‍यो ?
एजेन्सी ,भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि मात्र पाकिस्तानले आफ्नो हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने भएको छ । पाकिस्तानले आफ्नो हवाई मार्ग पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानका लागि बन्द गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी किर्गिस्तान भ्रमणमा जानका लागि भने पाकिस्तानी हवाई मार्ग प्रयोग गर्न सक्ने पाकिस्तानी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।